Shiinaha Qaybaha Waxyaabaha Qurxinta iyo soosaarayaasha | Biraha & Injineerinka
Waxaan (M&E) nahay soo saare xirfadle ah oo loogu talagalay birta & qaybaha qurxinta birta. iyada oo maareyn horumarsan iyo falsafad istiraatiiji ah oo suuqa ku jihaysan loo helo horumar wanaagsan oo waara marka la eego alaab tayo sare leh iyo sumcad wanaagsan
M&E birta qurxinta iyo birta ama alaabada been abuurka ah waxaa laga sameeyaa qalab tayo sare leh, oo ay soo saaraan labadaba habraac dhaqameed dhaqameed iyo hab wax lumay oo noo xaqiijin kara inaan soo saarno tiro aad u tiro badan oo tayo sare leh, oo si qurux badan loo qaabeeyay oo ay macaamiisheenu u baahan yihiin.
Qaybaha birta ah ee loo yaqaan 'M&E' ee qurxinta leh waxay leeyihiin qaabab kala duwan oo ka badan boqolaal cabbir bir birta cawl ah HT-20, heerka caadiga ah ee Amreican oo lagu dhejin karo koronto birta ah, Badeecadaha birta qurxinta leh waxay leeyihiin qaabab taxane ah sida ubaxyo, caleemo, koofiyad, silsilado, duub darbiyada w ..laax boqolaal cabbir ah oo maadada ka kooban heerka birta kaarboon yar tahay 25-35 oo si fudud ay isugu dhejin karaan elektaroodyada birta ah.
M&E birta qurxinta iyo birta ayaa loo dhoofiyey wadamada yurub. Waxay aad ugu qanacsan yihiin macaamiisha.
Waxaan bixinaa adeegga ugu fiican
Si naxariis leh u akhri buugyarahayaga si taxaddar leh oo noo sheeg qaabab faahfaahsan. Tirada iyo tirada aad u baahan tahay. Ilaa intaad kujirtid qadkeena ganacsiga, waxaan ku ilaalin doonnaa inaad na siiso buugyaraha ugu dambeeyay, sawiro, macluumaad cusub oo aan diyaarinay waxaanan kugu soo dhaweyneynaa inaad noosoo dirto wax naqshadeyn ah ama sawir ah. Waxaan aqbalnaa amar kasta ha weynaado ama ha yaraadee, waxaan leenahay awood wax soo saar oo ballaaran oo amarro ah oo aan fahamsanahay necsssity-ka amarrada yaryar. Marka amar kasta la xaqiijiyo, shixnadaha ayaa lagu fulin doonaa waqtiga loogu talagalay.
Waxaan ku faaneynaa badeecadayada M&E si aad u wanaagsan loogu iibiyo suuqa adduunka iyadoo wadashaqeyn dhow ay naga dhaxeyso macaamiisheenna adduunka oo dhan .Waxaan kuu xaqiijineynaa inaad ku qanci doontid alaabteena quruxda badan, adeegga wanaagsan iyo qiimaha ugu fiican.
Waa lagusoo dhaweynayaa inaad dhiibto wixii talo bixin ah iyo nashqado cusub
Hore: Waxyaabaha Tubbada & Bullaacadaha
Xiga: Tuuryo Baaxad Weyn
Qaybaha Qurxinta Birta ah ee ladilay